Ary ahoana no hamahana azy ireo
Indrisy anefa fa mihoatra noho ny fahadisoana folo azonao atao amin'ny teny Alemana! Na izany aza, tianay hifantoka amin'ireo karazana fahadisoana folo izay manomboka ny mpianatra alemà.
Saingy alohan'ny hahatongavantsika amin'izany, eritrereto izao: Ahoana no tsy mampiavaka ny fianarana fiteny faharoa amin'ny fianarana voalohany? Misy fahasamihafana maro, saingy ny fahasamihafana manan-danja dia ny hoe amin'ny fiteny voalohany dia tsy misy fanelingelenana amin'ny fiteny hafa.
Ny fianarana zaza vao teraka dia sombin-tany tsy misy dikany-tsy misy fomba fijery mialoha momba ny fomba tokony hampiasana ny fiteny. Tsy izany no zava-misy ho an'izay manapa-kevitra hianatra fiteny faharoa. Ny mpiteny Anglisy iray izay mianatra teny alemana dia tsy maintsy miaro amin'ny fitaoman-tserasera anglisy.
Ny zavatra voalohany tokony heken'ny mpianatra amin'ny fiteny dia tsy misy làlana mety na tsy mety hanamboarana fiteny iray. Ny teny anglisy dia ny azy; Alemana no tena izy. Ny fandikana ny fitsipi-pitenenana na ny voambolan'ny fiteny iray dia toy ny mifamaly amin'ny toetr'andro: tsy afaka manova izany ianao. Raha toa ka tsy misy dikany ny maha-lahy na maha-vavy azy, dia tsy afaka manova azy amin'ny an- davan'andro izany . Raha manao izany ianao, dia mety ho diso hevitra ianao. Ny fiteny ampiasaina dia manana fitsipi-pitenenana manokana mba hisorohana ny fielezan'ny fifandraisana.
Tsy azo ihodivirana ny fahadisoana
Na dia azonao aza ny hevitrao momba ny fitsabahana amin'ny fiteny voalohany, midika ve izany fa tsy hanao fahadisoana amin'ny teny alemana ianao?
Tsia mazava ho azy. Ary izany dia mitarika antsika amin'ny fahadisoana lehibe nataon'ny mpianatra maro: matahotra ny hanao fahadisoana. Ny teny sy ny fanoratana alemà dia fanamby ho an'ireo mpianatra amin'ny fiteny. Ny fahatahorana ny fahadisoana anefa dia mety hahatonga anao tsy handroso. Ireo mpianatra izay tsy manahy be loatra amin'ny mahamenatra azy dia mamarana amin'ny fampiasana ny fiteny bebe kokoa ary manao fandrosoana haingana kokoa.
1. Mieritreritra amin'ny teny anglisy
Ara-dalàna raha mieritreritra amin'ny teny anglisy ianao rehefa manomboka mianatra fiteny hafa. Fa ny fahadisoana nataon'ireo mpanjifany dia mieritreritra ara-bakiteny ary mandika teny ho an'ny teny. Rehefa mandroso ianao dia mila manomboka "mieritreritra alemana" bebe kokoa hatrany. Na dia ireo mpirotsaka an-tsehatra aza dia afaka mianatra "mieritreritra" amin'ny fehezanteny alemà eny aloha. Raha mbola mampiasa Anglisy foana ianao, mandika hatrany amin'ny teny Anglisy ho alemana, manao zavatra tsy mety ianao. Tsy tena mahalala ny teny alemà ianao raha tsy manomboka "mandre" izany any an-dohanao! Ny alemana dia tsy mametraka zavatra tahaka ny Anglisy foana.
2. Manambady Genders
Raha ny fiteny toy ny Frantsay, Italiana, na Espaniôla dia afa-po amin'ny maha-lahy sy maha-vavy azy fotsiny, ny alemanina dia manana telo! Satria ny anarana rehetra amin'ny teny alemà dia na ny maty, na ny maty, dia mila mianatra ny anarana tsirairay miaraka amin'ny lahy sy vavy. Ny fampiasana ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy dia tsy vitan'ny hoe manao tsinontsinona fotsiny ianao, fa mety hiova koa ny dikany. Eny, fantatro fa mihamafy izany fa ny olona enin-taona any Alemana dia afaka manaloka ny maha-lahy na maha-vavy azy, saingy izany no izy.
3. Tranga mampiahiahy
Raha tsy azonao hoe inona ny tranga "nominative" amin'ny teny Anglisy, na inona ny zavatra mivantana na indraindray, dia hanana olana amin'ny raharaha amin'ny teny alemana ianao.
Ny tranga dia matetika amin'ny teny alemà no ampiasaina amin'ny hoe "fametahana": mametraka endin-javatra samihafa amin'ny lahatsoratra sy ny adjectives. Raha miova ho an'ny dem , na dem , dia manao izany noho izany antony izany. Izany antony izany ihany no mahatonga ny mpisolo anarana "izy" hiova "azy" amin'ny teny anglisy (na er to him amin'ny teny alemà). Tsy ny fampiasana ny raharaha marina no tena mampisafotofoto ny olona!
4. Teny baiko
Ny teny baiko amin'ny teny alemà (na ny fonosana) dia mendri-pihetseham-po kokoa noho ny teny anglisy ary mampitombo kokoa ny endriky ny raharaha amin'ny fahazoana mazava. Amin'ny teny alemà, ny foto-kevitra dia mety tsy tonga aloha amin'ny fehezanteny iray. Amin'ny fehezan-teny miafina (miankina), ny matoanteny mifangaro dia mety amin'ny faran'ny clause.
5. Miantso olona iray ianao "fa tsy hoe" ianao "
Saika ny fiteny rehetra eto an-tany, ankoatra ny Anglisy, dia manana karazany roa amin'ny "anao" farafaharatsiny: iray ho an'ny fampiasana ara-dalàna, ny iray hafa noho ny fampiasana azy. Ny Anglisy indray mandeha dia manana io endrika io ("ianao" sy "ianao" dia mifandray amin'ny teny alemana "du"), fa amin'ny lafiny iray, ampiasaina amin'ny endriny rehetra izao ny endriny iray amin'ny "anao".
Midika izany fa manana olana amin'ny fianarana mampiasa anao (formal) sy anao / you (efa fantatra) matetika ny miteny anglisy. Ny olana dia lasa mifamadika amin'ny fampifanarahana sy ny baikon'ny baiko, izay tsy mitovy koa amin'ny toe-javatra misy anao sy ianao .
6. Fananarana diso
Ny iray amin'ireo fomba mora indrindra ahitàna mpandaha-teny tsy misy fiteny amin'ny fiteny iray dia ny fampiasana tsy fetezana ho an'ny prepositions. Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Ohatra tsy ampy amin'ny teny esperanto Amin'ny teny Anglisy, ianao dia mandray fanafody "amin'ny", amin'ny teny alemana ("manohitra") zavatra. Anarana iombonana amin'ny teny alemaina Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny alemaina Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny alemaina
7. Mampiasa ny Umlaute (Umlauts)
Ny Alemà " Umlauts " ( mihidy amin'ny teny alemà) dia mety hitarika olana ho an'ny mpandray anjara. Ny teny dia afaka manova ny heviny mifototra amin'ny hoe manana tosika izy ireo na tsia. Ohatra, ny payen dia midika hoe "mandoa" saingy zählen dia midika hoe "manisa." Rahalahy dia rahalahy, fa Brüder dia midika hoe "rahalahy" - mihoatra ny iray. Tandremo ireo teny izay mety manana olana mety hitranga. Koa satria i a, o, ary u dia afaka manana tohotra, dia ny voka-tsoa tokony hahatsikaritra izany.
8. Sehatr'asa sy fifanoherana
Ny mari-pamantarana alemana sy ny fampiasana ny apostoly dia samy hafa noho ny amin'ny teny anglisy. Matetika ny olona amin'ny teny alemà dia tsy mampiasa apôstropia. Ny teny alemana dia mampiasa fifandirana amin'ny fomba fiteny maro, ny sasany amin'izy ireo dia mampiasa apostoly ("Wie geht's?") Ary ny sasany amin'izy ireo dia tsy ("zum Rathaus"). Mifandraika amin'ny loza ateraky ny fisainana voalaza etsy ambony dia ny fihenan'ny alemana manohitra.
Ny fifanoherana toy ny am , ans , ins , na im dia mety mety ho fandrika.
9. Ireo fitsipika momba ny fitadiavam-bola any Pesky
Alemà no hany fiteny maoderina mitaky ny fanavotana ny anarana rehetra , saingy misy olana hafa mety hisy. Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny alemaina Amin'ny tenim-pirenena hafa English Amin'ny ampahany noho ny fanavaozana tsipelina alemana, na dia ny Alemà aza dia mety manana olana amin'ny fisorohana loza tahaka ny tsara indrindra na amin'ny teny anglisy . Azonao atao ny mahita ireo fitsipika sy ireo soso-kevitra maro momba ny famaritana alemana amin'ny lesona momba ny kapitalisma ary manandrama ny fomban-tsofina.
10. Ampiasaina ny 'Haben' sy ny 'Sein'
Amin'ny teny anglisy, ny tonga lafatra ankehitriny dia mifototra amin'ny matoanteny matoanteny manampy "manana." Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny alemaina Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny alemaina Pejy misy rohin-drakitra tapaka Dikanteny tokony homarinana avy amin'ny teny anglisy Koa satria ireo matoanteny amin'ny fampiasana "ho" dia tsy dia matetika loatra, mila mianatra izay mampiasa ny azy ianao na amin'ny toe-javatra misy ny matoanteny matoanteny mety ampiasaina ny habetsahana na ny fandinihana amin'izao fotoana izao na ny vanim-potoana tonga lafatra.
Ny hoe 'samy'
Online amin'ny dikanteny frantsay: azonao itokisana ve izy ireo?
Nomerao eo amin'ny fiteny sinoa
"Le P'tit Renne au Nez Rouge" - Carol Christmas Carol
Mianatra ny Sinoa nentim-paharazana miaraka amin'ny rakibolana MoE
Ubasute yama - Mianara avy amin'ny tantara iray
Ahoana ny fomba fianarana anao?
Ahoana ny fomba fanoroana ny fisaka amin'ny italiana amin'ny klavie
Ny taon-dasa Golden: Miteny momba ny fisotroan-dronono
Kitchen Cabinet, orinasa ara-politika
Ahoana ny famerenana ny kamiao 4x4 na ny SUV
Inona no atao hoe Baby 'Baby'?
Ny tantaran'ny dihy
Ny biography of Ferdinand Magellan
Mianara mimenomenona amin'ny gitara
Ny fizahan-toetra ara-pitsarana sy ny fisedrana salem
Ahoana no hamporisihana ny zanakao amin'ny andro fitsapana?
Triple Bogey: Inona no dikan'ny teny hoe Golf Scoring
1920 US Open: Taonan'ny Coming and Goings
Famaritana ny fanolorana anarana
Ny arangely ny 4 Elements: Air, Fire, Water, ary ny Tany
Fahalalahana kely amin'ny kely an-jatony amin'ny Yahtzee amin'ny rà tokana
Puzzles Art Search Word Art
Fanangonana sy fananganana bebe kokoa - Architecture eo anelanelan'ny rails